रोटीबेटीको सम्बन्धमा काँडा बनेर आयो कोरोना | Ratopati
सीमा क्षेत्रमा त्रास
प्रदेश ५ मा संक्रमित अझै बढ्न सक्ने अनुमान
personतेजेन्द्र के.सी. exploreरुपन्देही access_timeबैशाख २९, २०७७ chat_bubble_outline0
बुटवल । भनिन्छ, नेपाल–भारत सम्वन्ध रोटीबेटीसँग जोडिएको छ । नेपालको तराई भेगका बासिन्दा र भारतीय नागरिकबीच चल्ने बिहेबारी, रोजगारी, व्यापारलगायतका कारण पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध बर्षौंदेखि चलिरहेको छ । तराईका कतिपय जिल्ला तथा स्थानमा भारतीय र नेपाली नागरिकको किनमेल गर्न जाने बजार नै एउटै छन्
सीमाक्षेत्रका बासिन्दाहरुको सानो व्यापारदेखि रोजगारीका लागि समेत दुवैतर्फ जाउजाउ हुने गर्दछन् ।
पाँच नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ६ जिल्लाको भारतसँग सिमाना जोडिएका छन् ।
नवलपरासी, रुपन्देही कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र दाड भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला हुन् । तर खुला सिमाना र रोटीबेटीको सम्वन्धलाई अहिले कोरोना भाइरसको त्रासले अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
रोटीबेटीको सम्वन्ध बन्नु स्वाभाविक रहेको पूर्वकृषि राज्यमन्त्री तथा रुपन्देही मायादेवी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा ओमप्रकाश यादव (गुन्जारी) बताउँछन् ।
‘यो रोटीबेटीको पुरानो सम्बन्धमा अहिले कोरोना काँडा बनेर आएको छ । कामका लागि आउजाउ त हुने भैहाल्यो । त्योबाहेक हाम्रो समुदायमा यताउता बिहेबारी समेत हुुन्छ’, यादवले रातोपाटीसँग भने,‘तर अहिले कोरोनाले समस्या निम्तिएको छ ।’
१२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ मा ६ जिल्ला कोरोेनाको बढी जोखिममा रहने अनुमान गरिएपनि अहिलेसम्म बाँके, नवलपरासी, बर्दिया र कपिलवस्तु गरी तीन जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
ती सबै कोरोना संक्रमित भारतबाट आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरु भएको पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. बिनोद गिरीको भनाइ छ ।
प्रदेशमा कुल ३८५.२ किलोमिटर भारतसँग खुल्ला सीमा रहेकोमा ६ वटा मुख्य भन्सार नाका छन् । ६ वटा छोटी भन्सार र ४४ स्थानका दशगजासम्मै पिच सडकले जोडेको छ ।
प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका करिब ७ हजार र नेपाल प्रहरीका साढे ६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् ।
यो प्रदेशमा पछिल्लो पटक भेटिएका कोरोना संक्रमितहरु लकडाउनकै समयमा दिल्ली र मुम्बाईबाट नेपाल भित्रिएको पुष्टि भएपछि प्रहरीको दावी फिक्का भएको हो ।
रुपन्देहीको मर्चरबारका कोरोना संक्रमित युवा दिल्लीबाट लकडाउनकै समयमा चोरबाटो हुँदै घर आएका थिए । कपिलवस्तुका १५ कोरोना संक्रमित पनि लकडाउनकै समयमा नेपाल आएको पाइएको छ ।
रुपन्देहीको मर्चवारीमाई गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको भारतीय गाउँ कोल्हुई र पुरन्दपुर थाना आसपासका गाउँका ६ जनामा कोरोन संक्रमण भएको थियो । उताको सम्वन्ध जस्तै त्रास पनि मर्चबारमा कायमै छ ।
कोरोना संक्रमित भेटिएको भारतीय गाउँ कोल्हुईबाट नेपाली भूभाग मर्चवारीमाई गाउँपालिका पैदल पुग्न १० मिनेटमात्र लाग्छ । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा संक्रमित भेटेपछि पनि आउने क्रम नरोएपछि त्रास बढेको समरीमाई गाउँपालिकाका बासिन्दा निरन्जन पाठक बताउँछन् ।
तीन दिनयतामात्रै भारतबाट नेपालतर्फ भित्रिएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको संख्या पनि अत्यधिक छ । त्यो बाहेक सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरुको संख्या पनि करिब तीन हजार भन्दा बढी रहेकाले उनीहरुमा समेत कोरोना संक्रमण हुनसक्ने भय र जोखिम दुबै रहेकोे डा. गिरीको भनाइ छ ।